RASMI: Liverpool Oo Heshay Mucjiso Lionel Messi Oo Kale Ah, Mishiin Goolasha Ah & Da'yar 133 Gool Ku Dhaliyey 80 Kulan Oo Kaliya - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaRASMI: Liverpool Oo Heshay Mucjiso Lionel Messi Oo Kale Ah, Mishiin Goolasha Ah & Da’yar 133 Gool Ku Dhaliyey 80 Kulan Oo Kaliya
RASMI: Liverpool Oo Heshay Mucjiso Lionel Messi Oo Kale Ah, Mishiin Goolasha Ah & Da’yar 133 Gool Ku Dhaliyey 80 Kulan Oo Kaliya
July 16, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa heshiis rasmi ah ka saxeexday ciyaartoy lagu tilmaamay mucjiso sidii Lionel Messi oo kale ah, ahna mishiin goolasha ah oo shabaqa ay saaxiib yihiin.
Tababare Jurgen Klopp oo raadinaya dhaliye wanaagsan ayaa dhoosha ka qoslay markii ay kooxdiisa sida rasmiga ah ugu dhawaaqday heshiis rasmi ah oo ay ka saxeexday Mateusz Musialowski oo qandaraaskiisii ugu horreeyey ee xirfadeed u saxeexay Liverpool.
Laacibkan oo ay da’diisu tahay Mateusz Musialowski oo ay d’adiisu tahay 17 jir, ayaa hore ugu jiray kooxda da’yarta Liverpool, waxaana uu dhowaan ka dhaliyey Newcastle United laba gool oo midkood uu u tartamayo goolka ugu quruxda badan sannadka.
Mateusz Musialowski ayaa markii uu heshiiska saxeexay waxa loosoo dallacsiiyey kooxda koowaad oo uu tababarka la qaadanayo, halkaas oo uu tababare Jurgen Klopp kaga samayn doono qiimayn la xidhiidha haddii uu qayb ka noqon karayo naadiga koowaad xilli ciyaareedkan.
Liverpool ayaa u aragta laacibkan u dhashay waddanka Poland inuu yahay mustaqbalkeeda waqtiga dheer, waxaanu hadda kula sugan yahay waddanka Austria oo uu kula qaadanayo tababarka.
Wargeyska Liverpool Echo ayaa ku tilmaamay Mateusz Musialowski inuu goysmada kala mid yahay xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi, halka dhalintiisuna ay tahay wax layaableh.
“Waxa aan idiin sheegi karayaa in uu kubadda cagta bilaabay markii uu shan jir ahaa, isagoo u ciyaray kooxda Ajaks Czestochowa ee magaaladiisa.” Sidaas waxa yidhi Karolina Kurek oo intaas raaciyey: “Laakiin kaliya kubadda ma dhiibo, wuxuu se leeyahay xirfad cajiib ah, waxaanu doonaa inuu ciyaartoy walba sida uu doonayo ula dheelo, sidoo kale waxa uu jecel yahay inuu u gooyo ciyaaryahannada.”
Kurek oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Markii uu Musialowski sagaal jirka ahaa, waxa uu ka tegay Ajaks Czestochowa waxaanu ku biiray Rakow Czestochowa, tababarihiisuna wuu ka xumaaday. Rakow Czestochowa waa koox wanaagsan oo Poland ka dhisan, waxayna aka ciyaaraan heerka koowaad, laakiin mar walba waxay kooxdani ka hadashaa xiddigaha da’da yar.
“Musialowski wuxuu ka ciyaarayay garabka, balse tababarihiis Mariusz Solecki ayaa u sheegay in aanu kaliya halkaas ka ciyaarin balse uu goolasha dhaliyo. Waxa uu noqday ciyaartoyga ugu goolasha badan.”
Kurek oo sharraxaya sida uu uu Musialowski ku yahay gool-dhalinta waxa uu yidhi: “88 ciyaarood oo uu saftay ayuu dhaliyey 133 gool. Waxa uu ka ciyaari karaa boos walba oo weerarka ah, waxaanu aad ugu wanaagsan yahay goysmada balse sidoo kale wuxuu leeyahay awood difaacis.”
Liverpool ayaa bishii August ee sannadkii hore laoso saxeexatay Musialowski, laakiin waxa uu hadda qalinka ku duugay heshiiskii u horreeyey ee xirfadeed maadaama uu hadda uun sharciyan loo ogolaaday inuu saxeexo heshiis noocaas ah.